Kooxaha Juventus iyo Barcelona oo wadahadallo furanaya si ay isku dhaafsadaan labo laacib – Gool FM
(Yurub) 18 Jan 2020. Kooxaha Juventus iyo Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay wada fariisan doonaan miiska wada hadalka si ay iskula meel dhigaan suuurto-galnimadda ay isku weydaaran karaan laacibiinta kala ah Ivan Rakitic iyo Federico Bernardeschi.
Sida laga soo xigtay Warsidaha reer Spain ee AS kooxahan ka soo kala jeeda Waddamadda Talyaaniga & Spain ayaa mid walba oo ka mid ah waxa uu ku rajo weyn yahay in helo xiddiga kooxda kale jooga sida ugu dhaqsiyaha badan in kastoo aan la ogeyn waxa dhici doona.
Kooxda difaacanaysa horyaalka Serie A ee Juve ayaa raadinaysa inay xoojiso qadkeeda dhexe, isla markaana waxa ay ishaaranayaan raaca dhisaha Barcelona ee Ivan Rakitic, kaasoo ku dhibtooday inuu helo waqti badan oo uu ku matali karo kooxda ku ciyaarta garoonka Camp Nou xilli ciyaareedkan.
Sida ay warbixintu sheegayso Juventus ayaa ah kooxda saldhiga u ah wada xaajoodkan, maadaama ay si xooggan u danaynayaan helidda adeegga ninka reer Croatia ee Ivan Rakitic, waxaana ay ka shaqeynayaan sidii ay Barca ugu qancin lahayeen inay kaga badashaan Federico Bernardeschi oo da’ahaan ka yar waayeelka Blaugrana.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay heshiis noocan oo kale ah xagaagii hore, laakiin tababarahii laga raacdeeyay Barca ee Ernesto Valverde ayaa iska diiday inuu iska fasaxo Rakitic xilli aan haatan la ogayn macallinka cusub ee kooxda Quique Setien iyo sida uu ka yeeli doono mustaqblka Rakitic kaasi oo xiiso ka helaya kooxda Juventus.